Fitehirizam-boky ho An’ny Tenin’ny Tanana Malagasy (2007-2020)
Fiteny vaovao misy: Bari, Romany (Chile)
Alakamisy 26 Novambra
Nanoro hevitra ny Jiosy [i Kaiafa] hoe tsara ho azy ireo raha olona iray no maty ho an’ny vahoaka.—Jaona 18:14.
Nandrasan’i Kaiafa ho alina ny andro, dia naniraka miaramila izy hisambotra an’i Jesosy. Efa fantatr’i Jesosy izany teti-dratsiny izany. Tamin’izy niara-nisakafo farany tamin’ireo apostoly àry, dia nasainy naka sabatra roa ry zareo. Nisy lesona lehibe tiany hampitaina mantsy, ka sabatra roa ihany no nilainy tamin’izany. (Lioka 22:36-38) Nisy andian’olona tonga hisambotra an’i Jesosy taoriana kelin’izay. Tsy rariny ilay izy, ka tezitra be i Petera, dia naka sabatra ary namely olona iray. (Jaona 18:10) Hoy anefa i Jesosy taminy: “Avereno amin’ny tranony ny sabatrao, fa ho fatin’ny sabatra izay rehetra mampiasa sabatra.” (Mat. 26:52, 53) Inona àry ilay lesona lehibe nampitain’i Jesosy tamin’izy ireo? Tsy tokony ho anisan’ity tontolo ity izy ireo. Efa nivavaka momba izany izy taloha kelin’izay. (Jaona 17:16) Andriamanitra ihany no manan-jo hiady amin’ny tsy rariny. Miezaka foana àry isika mba hiray saina sy hihavana. Azo antoka fa faly be i Jehovah mahita hoe miray saina ny mpanompony, na dia misara-bazana aza ity tontolo ity.—Zef. 3:17. w18.06 7 § 13-14, 16
Zoma 27 Novambra
Tezitra tamin-dravehivavy ilay dragona, ka lasa nandeha niady tamin’ny sisa amin’ny taranany.—Apok. 12:17.
Tsy vitan’ny hoe mamandrika antsika fotsiny i Satana fa mampitahotra antsika koa izy, amin’izay isika mivadika amin’i Jehovah. Mety hampiasa ny fitondrana, ohatra, izy mba handrarana ny asa fitoriana. Mety hataony izay hahatonga ny mpiara-miasa na ny mpiara-mianatra amintsika haneso antsika, noho isika miezaka manaraka ny fitsipiky ny Baiboly. (1 Pet. 4:4) Mety ho ny havantsika tsy Vavolombelona koa no hampiasainy. Mety hosakanan’izy ireny tsy hivory isika, satria heveriny hoe izay no mahasoa antsika. (Mat. 10:36) Inona no hanampy antsika tsy ho resin’i Satana? Voalohany, fantatsika fa miady amintsika i Satana, ka tokony ho efa ampoizintsika ireny karazana fanafihana mivantana ireny. (Apok. 2:10) Faharoa, mila mitadidy ny tena anton’ireny fisedrana ireny isika: Milaza i Satana fa rehefa mora amintsika ny manao izay lazain’i Jehovah, izay isika vao mankatò azy. Milaza izy fa hivadika amin’i Jehovah isika rehefa manana olana. (Joba 1:9-11; 2:4, 5) Farany, mila mangataka hery amin’i Jehovah isika mba tsy ho resin’i Satana. Tadidio fa tsy hanary antsika mihitsy izy.—Heb. 13:5. w18.05 26 § 14
Asabotsy 28 Novambra
Tsy fantatrao izay ho vanona.—Mpito. 11:6.
Aza hadinoina fa misy vokany ny fitoriana ataontsika, na dia hoatran’ny hoe tsy misy mihaino aza isika. Mandinika antsika ny olona ka voamarik’izy ireny hoe madio sy milamina ny paozintsika, mahalala fomba isika, ary mitsikitsiky tsara. Rehefa mahita an’izany ny olona sasany, dia mety ho tonga saina any aoriana any hoe diso ny fiheverany antsika. Nahamarika an’izany i Sergio sy Olinda, mpisava lalana. Izao no nolazainy: “Nisy fotoana izahay mivady narary, dia elaela kely izahay tsy nandeha nitory teny akaikin’ilay fijanonan’ny bisy. Rehefa niverina nitory teny izahay, dia nisy mpandalo niteny taminay hoe: ‘Ela izany! Nalahelo anareo izahay.’” Aza atsahatra àry ny tananao fa afafazo foana ny voan’ilay Fanjakana. Amin’izay ianao dia handray anjara be amin’ilay fitoriana atao any “amin’ny firenena rehetra.” (Mat. 24:14) Ho faly be koa ianao satria fantatrao fa ankasitrahan’i Jehovah ianao. Tena tiany mantsy izay “mamoa amin’ny fiaretana.”—Lioka 8:15. w18.05 16 § 16-18